Muxuu yahay tusaalaha 130 | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Encarni Arcoya | 10/06/2021 08:04 | Dhaqaalaha guud
Xigasho Muxuu yahay tusaalaha 130: Famisenper
Markaad fuliso hawl dhaqaale, mid ka mid ah nidaamyada ay tahay inaad fuliso waa bixinta qayb ka mid ah cashuurta dakhliga shaqsiyeed. Tan waxaa lagu sameeyaa qaabka 130. Laakiin, Waa maxay nooca 130?
Haddii aad dhawaan isdiiwaangalisay, ama aad rabto inaad ogaato waxa uu yahay foomka 130 iyo sida saxda ah ee loo buuxiyo, markaa waxaan kuu sheegaynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato nidaamkan iyo, wixii ka sarreeya, sida loogu hoggaansamo Khasnadda si uusan ciqaab u jirin.
1 Muxuu yahay Model 130
2 Sida loo buuxiyo
2.1 Talaabo talaabo ah tusaalaha
Xigasho: wakaalada cashuuraha
Qaabka 130 ayaa koobaya waxa uu yahay "Cashuur celinta dakhliga rubaclaha ah ee shaqsiyaadka". Waa lacag la bixiyo qaybo yar (waxaa la bixiyaa saddexdii biloodba mar) taas oo qayb ka mid ah lacag bixinta ay tahay in laga sameeyo cashuurta dakhliga shaqsiga la siiyo Khasnadda.
Dabcan, dadka oo dhan waajib kuma aha inay sidaa yeelaan, kaliya kuwa ku jira kiisaska soo socda:
Kuwa fuliya howlaha dhaqaale, oo ay kujiraan beeraha, xoolaha, keymaha ama kaluumeysiga. Dabcan, waa inay dejiyaan habka qiyaasta tooska ah, mid caadi ah ama mid fudud.
Inay fuliyaan hawlo mihnadeed. Marka laga reebo haddii 70% dakhligaaga horeyba u haystay reebitaan ama dhigaal. Hadday sidaas tahay, maahan inay buuxiyaan Foomka 130.
Hadday yihiin iskaashi sokeeye iyo / ama bulshooyinka hantida leh. Xaaladdan oo kale, lammaane kastaa waa inuu ku bixiyaa lacag bixinta iyada oo ku saleysan ka qaybqaadashadooda.
Sida loo buuxiyo
Hadda way kuu cadahay waxa foomka 130 yahay, waxaa la joogaa waqtigii la ogaan lahaa sida loo buuxiyo si ay ugu fiicnaato Khasnadda oo aysan u soo jiidan dareenkaaga; ama kaba sii darane, waxay kugu soo rogayaan cunaqabateyn.
Waa inaad maskaxda ku haysaa in, Qeybta Baaqa, waa inaad ku buuxisaa labada NIF iyo magaca iyo magaca qoyska. Kadib, aagga isku-darka, waxaa muhiim ah inaad caddeyso sannad-maaliyadeedka ay tilmaamayso iyo muddada rubuc.
Markaad ku dhawaaqeyso soo laabashada shabaqa, waa inaad maanka ku haysaa inay soo ururtay. Taasi waa, ka fikir in rubuca hore aad ka heshay 100 euro oo faa'iido ah. Rubuca labaad, waxaad heysataa 200 euro. Si kastaba ha noqotee, markaad buuxineyso foomka 130, waa inaad ku dartaa dakhliga aad ku dhawaaqday rubuca koowaad iyo kan labaad. Si kale haddii loo dhigo, rubuckan ugu dambeeya ma noqon doono 200 euro oo faa'iido ah, laakiin 300 euro (200 + 100 rubuca hore).
Isla sidaas ayey ku dhacdaa kharashaadka hadhow, waa inaad ku dartaa kuwa dhammaan dhinacyada, ballaadhinta kharashka kaaga baxay kan hadda socda.
Guud ahaan, tusaalaha 130 wuxuu leeyahay saddex qaybood oo kala duwan.
Qaybta I halka dakhliga iyo kharashaadka la dhigo oo la xaqiijiyo intee in leeg waa 20% ka jarista kharashyada dakhliga. Intaas ka dib, waxa haynta ah ee laga yaabo inaad haysatay iyo sidoo kale wixii aad ka bixisay xaafadihii hore ayaa la adeegsadaa waxaadna heli doontaa natiijo.
Qaybta II, diirada la saaray kuwa fuliya wax soo saarka beeraha, keymaha, kalluumeysiga ama waxqabadka xoolaha, kuwaas oo ku qasbanaan doona inay buuxiyaan tusaalaha qeybtaan.
Y qaybta III, taas oo ah soo koobista dhammaan waxyaabaha kor ku xusan halka ay na siineyso tirada ugu dambeysa, taas oo noqon karta in la bixiyo ama la magdhabo.
Talaabo talaabo ah tusaalaha
Xigasho: Gargaarka Canshuuraha
Si aad u cadeyso, maskaxda ku hayso waxyaabaha soo socda:
Sanduuqa 1: halkaas waa inaad dhigtaa dakhliga sannadka.
Sanduuqa 2: geli kharashyada sanadka.
Sanduuqa 3: tani waa otomaatig, waxa ay qabato ayaa ka jaraya dakhliga iyo kharashyada.
Sanduuqa 4: wuxuu ku weydiin doonaa inaad gacanta ku xisaabiso inta 20% ka mid ah natiijada sanduuqa 3aad yahay, waa haddii natiijadaasi ay ahayd mid togan. Waa maxay diidmo? Eber dhig.
Sanduuqa 5aad: goobtan waxaad kuheleysaa wadarta labada sanduuq, 7 iyo 16. Kuwaani waa xaddiyada 130 nooc oo aad horay usoo bandhigtay. Haddii, tusaale ahaan, ay tahay sannadka ugu horreeya, ma aha inaad halkan wax dhigato. Laakiin haa laga bilaabo saddexda bilood ee labaad. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay inaad haysato dukumintiyada kor ku xusan.
Sanduuqa 6aad: waxaad kuheli doontaa wadarta lacagta haynta ee aad codsatay ama aad codsatay.
Sanduuqa 7: waa kala-goyn kale, laga bilaabo sanduuqa 5 iyo 6 ee sanduuqa 4. Si kale haddii loo dhigo. Waxa lagaa rabo inaad bixiso (sanduuqa 4) ayaa laga jari doonaa haynta (5 iyo 6) oo horeyba loo maleynayo in lagu galay magacaaga.
Ilaa halkan waxay ahaan laheyd dadka iskood u shaqeysta ama shakhsiyaadka leh dhaqdhaqaaq dhaqaale. Hadda, haddii aad ka shaqeyso beeraha, xoolaha, kalluumeysiga ama keymaha, waa inaad buuxisaa waxyaabaha soo socda:
Sanduuqa 8: waa inaad gelisaa dakhliga sannadka oo dhan, oo ay ku jiraan deeqaha, gargaarka ...
Sanduuqa 9: 2% ee qaddarka sanduuqii hore ayaa lagu dabaqi doonaa iyada oo aan la tixgelinaynin kharashyada.
Sanduuqa 10: waxaa loo isticmaali jiray in lagaa dhigo lacagta lagaa doonayo ee aad ku dalban jirtay qaansheegadka aad sameysay.
Sanduuqa 11aad: Waa midka kala goyn doona sanduuqyada 9aad iyo 10aad, isagoo siinaya natiijo noqon karta mid taban ama togan.
Ugu dambeyntii Qaybta III waa soo koobid, sanduuqyada u dhigmaana waa:
Sanduuqa 12: halka aad dhigeyso wadarta sanduuqyada 7 iyo 11. Mar labaad, waxay noqon kartaa qiime togan ama taban.
Sanduuqa 13: wax aan dad badani ogayn ayaa ah, marka dakhligaagu hooseeyo, Khasnadda ayaa kuu oggolaanaysa hoos u dhac ilaa 100 euro ah. Waxa ugu fiican ayaa ah inaad raadiso macluumaad ku saabsan sanduuqaas gaarka ah si aad u ogaato qiimaha aad ku dalban karto sicir-dhimista (haddii aad awoodid).
Sanduuqa 14: waxaa jiri doona farqiga u dhexeeya sanduuqyada 12 iyo 13. Haddana wuxuu noqon karaa mid togan ama taban.
Sanduuqa 15: waxaa loo isticmaalaa in lagu qoro qiimaha xun. Si kale haddii loo dhigo, haddii aad natiijooyin xun ku heshay sanduuqa 19, waa inaad sheegtaa, marka lagu daro, waa inaad maanka ku haysaa in qiimaha sanduuqaasi uusan ka sarreyn karin kan 14.
Sanduuqa 16: haddii sanduuqa 14 uu ahaa mid wanaagsan oo aad sidoo kale bixiso amaah ah iibsashada ama dayactirka gurigaaga, waad ka goyn kartaa kharashaadkaas halkan. Immisa ayaad ka goyn kartaa? Hagaag, xaddiga kujira sanduuqa 3 (ama 8 haddii aad leedahay waxqabad beeraha, waxqabadyada xoolaha ...). Taasi haddii, xadka lagu soo rogay 660,14 euro.
Sanduuqa 17: way fududahay, natiijada ka soo goynta sanduuqyada 14 iyo 15.
Sanduuqa 18: waxaad buuxineysaa oo keliya haddii uu jiro cadeyn dhameystiran. Haddii kale, waxay ahaanaysaa eber ama maran.
Sanduuqa 19: ugu dambayntii, sanduuqan wuxuu ka jarayaa 17 iyo 18, isagoo siinaya natiijo taas la mid ah tusaalaha 130. Haddii ay wanaagsan tahay, waa inaad bixisaa; iyo hadday diidmo tahay, waad ku magdhabnaan kartaa moodooyinka soo socda ee sannadka (sidoo kale waxaad ku soo celin kartaa wixii aad bixisay)
Sidan oo kale, waxaad kuheli kartaa hage oo aad sifiican ugu fahmi kartaa tusaalaha 130 wuxuu yahay iyo sida saxda ah ee loo buuxiyo si ay wax waliba sax u yihiin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Muxuu yahay Model 130
Kobaca dhaqaalaha: waa maxay, sababaha, sida loo cabiro